မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: May 2010
၁၉၈၈ ကျောင်းသားစိတ်ဓါတ်နဲ့သန်းနိူင်
အော် မြန်မာပြည်က ထွက်ကုန်တွေထဲက ရေတောင် အရသာရှိပါလားလို့ 
တခြားနိူင်ငံတွေ ရောက်မှ တန်ဖိုးကိုနားလည်မိသည် ။
(အမြောက်ကျည်ဆံ ဒဏ်ခံရန် သစ်လုံးများအောက်တွင် ၁၀ပေ ပတ်လည် အနက် ၅ ပေ ကျင်းတူးပြီး အိပ်သည့်
ကျည်ကွယ်မျက်ကွယ်ကို ခေါ်ပါသည် ။တချို့ က ဘန်ကာ ဟုလည်းခေါ်ပါသည် )
ယိုင်နဲ့ နဲ့ ဝါးတဲ ထဲမှ ကိုဇော်ဇော် (ကနေဒါ) ကိုကျော်မင်းဦး ( သတင်းပျောက်) ကိုမောင်လှ (မဲဆောက်)
ကိုနေမျိုး ကိုအေးဝင်းတို့ တသိုက် အိပ်ချင်မူးတူးနှင့် ထလာကြပါသည် ။
ကျွန်တော်လည်း ညကအရှိန်နဲ့ အော်ဟုတ်လားဟု မူးကြောင်ကြောင် အဖြေပေးတတ်တာ အခုထိထင်ပါတယ် ။
၆ မေလ ၂၀၁၀
၉၆၂ ခုနှစ်က စပြီး ပြည်သူ့ အာဏာ လုယူခဲ့လို့သူခိုး ဒါးမြ အဆင့်ပါ။ ဆိုရှယ်လစ်ကို နားမလည်ဘဲ ဖုတ်ပူမီးတိုက် သင်တန်းတွေနဲ့ရိုက်ထဲ့ပေမဲ့ လဲ ၁၉၈၇ မှာ မြန်မာပြည်ဟာ အဆင်းရဲဆုံး အဆင့်ကိုရောက်သွားပါတယ် ။
သူခိုး ဒါးပြ ပီပီ ဖြစ်လာတဲ့ပြသနာတွေကိုလည်း သူခိုးနည်းနဲ့ ဖုံးဖိ လိမ်ညာခဲ့ ကြတဲ့အဆုံး ၁၉၈၈ က အမှန်တရားဘက်တော်သား ကျောင်းသားက စပြီးတော်လှန်လို့ နာမည်ခံ မဆလကြီး ပြုတ်ခဲ့ပါတယ် ။
((လေယာဉ်ပျံ ကိုပြန်ပေးဆွဲရာမှာ ဘယ်လိုထင်လဲမေးတော့
အဲဒီ အစ ၈၈ကာလတုံးကထဲက
မြန်မာပြည်ကို လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲနဲ့ပြောင်းလဲဖို့ ဆိုရင်
အကူအညီမရဘူးဆိုတဲ့မူနဲ့ သွားနေတာ အခုထိဘဲ ။
Posted by Mr Htay Tint at 1:34 PM2comments
နာမည် လွဲသွားတာ သေဒဏ်လွတ်သွားတယ်
Date: Thu, 27 May 2010 08:17:28 -0400 ကဝင်လာတဲ့စာ
ဦးထွန်းအောင်ကျော် ( အီသာကာ)
လူလိမ် မင်းနိုင်ဘက်က ရှေ့နေလိုက်ပေးနေတဲ့အတွက် ဦးထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့သမိုင်းကို
ပိုသိချင်စိတ်ပေါက်သွားပါတယ်။ ဦးထွန်းအောင်ကျော်အကြောင်းကို ပြည့်စုံအောင်
ရွှေဇီးကွက် ဆီက လက်ခံရရှိတယ်ဆိုတဲ့စာကို ဦးထွန်းအောင်ကျော်မြင်ပြီးပြီလို့
ပြီးရင် ကျနော်တို့ဘက်က လက်ခံရရှိတဲ့ ကိုကျော်သူ့စာကိုလည်းတင်ပေးပါမယ်။
အတုတွေ၊ အစစ်တွေကို ကိုကျော်သူနဲ့မရွှေဇီးကွက်တို့က ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ခင်ဗျားတို့ညီလာခံမှာ လူ(၁၀၀) လောက်လာတယ်လို့အင်တာဗျူးတခုမှာပြောထားပါတယ်။
ပုံထဲမှာ ကျနော်တို့ရေကြည့်တာ လူ(၄၀) တောင်အနိုင်နိုင်ပါလားဗျ။ ရှစ်လေးလုံး
ဘတ်ဖလိုးမြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံသား သုံးထောင်ကျော် ထောင်ကျော်ရှိနေထိုင်ပါတယ်။
Thursday, May 27, 2010 3:49:13 PM မှာ နားမလည်လို့ မေးမိတယ်
ကြားနေရတဲ့ အတင်းတွေ ကနေ အမုန်းခံပြီး သတင်းအဖြစ်တင်ပြတာ
ညီလာခံနောက်ဆုံးနေ့တနဂ်နွေနေ့ က ကျွန်တော်လည်း အင်တာနက်က
ကိုထွန်းအောင်ကျော်ပြောတာ တိုးတိုးလေး အင်တာနက်က ကြားရတာ
မင်းနိူင် တကယ်ငွေတွေ မပို့ ရင် နစ်နာသူတွေအတွက်
စုပြီး စိုက်ပေးမယ် လို့ ပြောတာပါ ။
ညီလာခံကို မထိခိုက်စေချင်ပါဟုပြောတာပါ ။
ကိုရာဇာ ရောက်လာပြီး ကျွန်တော့်ကို ကိုမင်းနိုင်က ကိုရာဇာကို ဖြတ်ပိုင်းပြခဲ့ကြောင်း ။
သူ့ အတွက် အရေးမကြီးလို့မှတ်မထားကြောင်း လိုအပ်လျှင်
ပြန်မေးပြီး ကော်ပီဆွဲ ပို့ ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါသည် ။
အခုညီလာခံမှာ ကိုမင်းနိုင် ပြဿနာ ထက် တခါတရံမှ တွေ့ ရသည့်မိတ်ဆွေများ
စုပေါင်းပြီး ၂၂ နှစ် သက်တန်းတော်လှန်ရေးအတွက်
လမ်းကြောင်းချရန် ကို ရာဇာကပြောခဲ့ပါတယ် ။
နယ်သာလန် နော်ဝေ အော်စတြေးလျှ အမေရိကန်အထက်အောက် မှာကွဲနေကြတာ
နှစ် ၂၀ ကျော်ပါပြီ ။
လူလိမ်မင်းနိုင် ဆိုတာ ကိုဇေယာကျော် စာအရသာသိသေးတာပါ ။
ကျနော်တို့ဘက်က လက်ခံရရှိတဲ့ ကိုကျော်သူ့စာကိုလည်းတင်ပေးပါမယ်လို့ ရေးထားပါတယ် ။
ကိုဇေယာကျော်ရေးတဲ့ စာကိုနားမလည်ပါ ။
လူတဘက်သားကို လူလိမ်လို့ အများသိအောင် စာတွေဝေပြီးမှ
ကိုကျော်သူနဲ့မရွှေဇီးကွက်တို့ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကို ပြန်ယူရမယ်ဆိုတော့
ကိုဇေယာကျော် အသက်အရွယ်နဲ့ပညာအရည်အခြင်းကို ပြန်မေးပါရစေ ။
ညီလာခံတက်ခဲ့သူတွေ တိုက်ပွဲဟာ ကိုဇေယာကျော် ရဲ့ မသေချာတဲ့
ကိုဇေယာကျော် ၁၉၈၈မှာ မွေးပြီလား ။မြန်မာပြည် ပြင်ပမှာနေထိုင်နေတာလား။
၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံဟာ တဦးတယောက် တဖွဲ့ က စနစ်တကျ ဦးဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။
စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်း ကနေ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၊
အထက်တန်းများ ရဟန်းများ ပြည်သူများသို့ အဆင့်ဆင့် ကူးပြောင်းပြီး
မဆလများက ပြည်သူ့ ရှေ့ မှာလက်နက်ချ ကပ်ပြားတွေအပ်ပြီး မဆလက နှတ်ထွက်တဲ့ အထိ ပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ် ။
ကိုဇေယာကျော်မေးတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ဘယ်သူတွေပါလဲ ခင်ဗျား
ရထားသံလမ်းသူခိုးကနေ လူသတ်ခဲ့သူလား ။ တောမြို့ မှာ မိုးရေထိုးပြီး ပိုက်ဆံညာတောင်းနေသူလားလို့ 
ပြန်စွပ်စွဲ မေးရင် စိတ်ဆိုးမယ်ထင်တယ် ။
၁၉၈၈ဟာ ခံစားချက်တူသူတွေ မိမိနေရာကနေ တာဝန်ကြေအောင် ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတာပါ ။
၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း မှာ ၁၉၈၈ကို နာမည်ရောင်းစားပြီး အာဏာရူး နေရာလုသူတစုကြောင့်
၂၀၁၀ မှာ အားလုံးဟာ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ အစည်းပြေခဲ့ပါပြီ။
၂၂ နှစ် ကာလ နိူင်ငံရေး တော်လှန်ရေး လူမှုရေး ဖေါက်ပြန်ခဲ့သူကို
ဘယ်စည်းမျဉ်းနဲ့ဖေါက်ပြန်သူသတ်မှတ်မှာလဲ ။
ဘယ်ဥပဒေနဲ့အရေးယူကြမှာလည်း
ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ ခွင့်လွတ်ပြီး ပြန်လက်တွဲကြမှာလည်း
ကိုဇေယာကျော် လား မဇေယာကျော်လား
ဇေဇေလား ယာယာလား ကျော်ကျော်လား
ဘတ်ဖလိုးမြို့မှမြန်မာနိုင်ငံသား သုံးထောင်ကျော် ထောင်ကျော်ရဲ့ 
အနာဂါတ် စံပြ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်လား
Thursday, May 27, 2010 မှာရန်ကုန်က ရှင်းပြလိုက်တယ် ။
ကျွန်တော်ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူရွှေဇီးကွက်ထံမှကိုမင်းနိုင်ထံသို့ July/16/2008 နေ့ စွဲ့ဖြင့် 
ဒေါ်လာ..3800 (42.75000) kyats. ကို လက်ခံ ရ ရှိ်ကြောင်း အကြောင်းပြန်ပြီး ပါကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည် ။ ကျွန်တော့်ထံသို့ဆက်သွယ်သည်ဟုဆိုရာတွင်မည်သည့်အချိန်..နေ့ ..ရက်..လ..နှစ်ကနည်း... ?
ကျွန်တော်သည်2008,2009 ခုနှစ်များတွင်INTERNET ကိုလုံးဝအသုံးမပြုပါ။
Posted by Mr Htay Tint at 3:13 PM0comments
ထိုင်းနိူင်ငံကို ရုပ်တရက် ကြည့်ရင် ထိုင်းလူမျိုးဟုဆိုသော်ငြားလည်း
အောက်ပိုင်းကစပြီး ဘန်ကောက် အထက်နားအထိ ဟန်သာဝတီ ဆက်မွန်လူမျိုးများရဲ့နယ်မြေဒေသဖြစ်ပါတယ် ။
ခြံမြေ စီးပွားရေးတောင့်တင်းပြီး အေးအေးနေတတ်ကြပါတယ် ။ စစ်ပွဲ အကျိုးဆက်ကို နားလည်ကြလို့စစ်မဖြစ်လိုကြပါဘူး ။
အထက်ပိုင်းကတော့ တရုပ်နွယ်ဖွားတွေများပါတယ် ။ ပြည်ပစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများပေါ်အဓိကထားကြပါတယ် ။
အရှေ့ ပိုင်းမှာတော့ အိစန်လို့ ခေါ်တဲ့ လူတွေနေကြပါတယ် ။ မိုးခေါင်ရေရှားဒေဖြစ်လို့လယ်လုပ်ငန်းကို လုပ်သော်လည်း
လူငယ်အများစုက အဆင်ပြေရာဒေသများမှာ အလုပ်လုပ်ကြပြီး ငွေပို့ ကာ တနှစ်တကြိမ်သာအိမ်ပြန်ပါတယ် ။
ထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့တည်ဆောက်ပုံဟာလည်း သီးခြားထူးးခြားမှု ရှိနေပါတယ် ။
ထိုင်းမှတ်ပုံတင် ရှိသူ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် လူငယ်များအားလုံးဟာ
ထိုင်းနိူင်ငံ ကာကွယ်ရေးအတွက် စာရင်းကို ရပ်ကွက် ကျေးရွာသူကြီးများမှတဆင့်
စာရင်းတင်ပေးရပါတယ် ။ ပညာထူးချွန်သူများကို သီးခြားစဉ်းစားပါတယ် ။
ထိုင်းစစ်တတ်ဟာ တနိုင်ငံလုံးမှာ လှည်လည်ပြီး စစ်ဆေးကာ ရွေးချယ်ကာ စစ်သင်တန်းပေးပါတယ် ။
ပြီးလျှင် ၂ နှစ် ၆ လ စစ်မှုထမ်းစေပါတယ် ။ ဝါသနာပါသူများ ထူးချွန်သူများကတော့
ဆက်လက် သင်တန်းများ တက်ပြီး အမှုထမ်းကြပါတယ် ။
အမြင့်ဆုံး အုပ်ချုပ်သူကတော့ ဘုရင်မင်းမြတ်ဖြစ်ပါတယ် ။
ထိုင်းဘုရင်ဟာ အကြီးမားဆုံး လက်နက်ကိုင်တပ်ရဲ့ သေနာပတိချုပ်ဖြစ်ပါတယ် ။
တိုင်းပြည်နယ်စပ် လုံခြုရေးနဲ့ဖွံဖြိုးရေး ကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်နေပါတယ် ။
လူငယ်များထဲက ထူးချွန်ပြီး ဝါသနာပါသူများက ဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်
ပုလိပ်တပ်ဖွဲ့ မှ စစ်သော စာမေးပွဲများမှ တဆင့်သင်တန်းများတက်ရပါတယ် ။
သင်တန်းပြီးလျှင် သာမာန်အောင်မြင်သူများက နယ်မြေစိုးမိုးရေး တာဝန်ယူကြပြီး
နယ်မြေတွင်းက လူထုနဲ့တရားဝင် စီးပွားရေး လုပ်နေသူများကို စောင့်ရှောက်ရပါတယ် ။
ရဲတပ်ဖွဲ့ ဟာ မူလဥပဒေများ တရားရုံးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်များ လွတ်တော်မှ ဥပဒေအသစ်များ
အောက်မှာ အလုပ်လုပ်ကြပါတယ် ။
အချို့ သောထူးချွန်သူများက ဥပဒေကို တက္ကသိုလ်မှာအလုပ်တဖက်နဲ့ ဆက်တက်ကြပါတယ် ။
တနည်းအားဖြင့် ဥပဒေကို ကာကွယ်စောက်ရှေက်သူများလို့ ခေါ်နိူင်ပါတယ် ။
ဥပဒေတက္ကသိုလ်များ ပညာသင်ပြီးတဲ့ လူငယ်များက
ဥပဒေဝန်ထမ်းအုပ်စုကြီးထဲကို ဝင်ရောက်တာဝန်ယူကြပါတယ် ။
အများကတော့ တရားသူကြီးလုပ်ငန်း အခြေခံက စကြပါတယ် ။
တရားသူကြီးများရဲ့ အထက်မှာ ထောင်သောင်း ပေါင်းများစွာ ရေးထာပြီး
လူကို လူကိုမြင်တဲ့ဓလေ့ထုံးစံနဲ့ဥပဒေများသာရှိပါတယ် ။
အချို့ က ပုလိပ်တပ်ဖွဲ့ ဝင်ကြပြီး တချို့ က လုံခြုံရေးကုမ်မဏီမှာ လုပ်ကြပါတယ် ။
တချိန်က ဆင်းရဲနွမ်းပါးခဲ့တဲ့ ထိုင်းနိူင်ငံက
အများစုဟာ စီးပွားရေးကို အခြေခံစဉ်းစားကြပါတယ် ။
ထိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်း အိုးအိမ်မြေယာပိုင်ဆိုင်ရေးမူကို ရင်ထဲမှာ ရှိနေကြပါတယ် ။
အဲဒီခံစားမှုကနေ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ဥပဒေက မြေယာပိုင်ဆိုင်ရေးနဲ့ရောင်းဝယ်ရေးပါ ။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မူလပိုင်ရှင်မိသားစုဝင် အခြင်းခြင်းသာ ရောင်းဝယ်ခွင့်ရှိပါတယ် ။
နိူင်ငံခြားသားတွေကတော့ ကွန်ဒို လို့ ခေါ်တဲ့ လေထဲက အဆောက်အဦးသာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ 
၁၉၉၅ ခုနှစ်လောက်က ထိုင်းလွတ်တော်က ဥပဒေပြုခဲ့ပါတယ် ။
ဗုဒ္ဒဘာသာအများစုပါတဲ့ လွတ်တော်ထဲက ပါတီတွေအများစုနဲ့ တွဲလုပ်နေတဲ့
လွတ်တော်ဥက္ကဌဟာ ခရစ်ယာန်ဖြစ်နေတာ ထူးခြားမှုပါ ။
ဘာသာရေးလွတ်လပ်မှု အပြည့်ရှိနေတယ်ဆိုတာပြတာပါ ။
ဟောင်ကောင်ကျွန်းကို တရုပ်ပြည်မကြီးလက်ပြန်ထည့်မည် အစီအစဉ်ဟာ
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးကိုပြောင်းဖို့ 
အဲဒီတုံးက ထိုင်းစစ်တပ်ကလာတဲ့ဝန်ကြီးတွေက စဉ်းစားခဲ့တာပါ ။
တိုးတက်နေတဲ့ ကမ္ဘာစီးပွားရေးကို ဖြတ်လမ်းကလိုက်တဲ့ လမ်းစဉ် တခုက်ို
ထိုင်းလွတ်တော်က ချမှတ်ခဲ့ပါတယ် ။
ဟောင်ကောင်ကျွန်း တိုင်ဝမ်ကျွန်းကို အခြေခံပြီး နိူင်ငံတကာက
စီးပွားရေးသမားတွေ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အခြေချနိူင်ဖို့ 
မြေယာကာကွယ်ရေးဥပဒေတွေကို ပြုပြင်ခဲ့ပါတယ် ။
(မြန်မာပြည်က အတုခိုးပေမဲ့ ပညာရှင်တွေတန်ဘိုးမဲ့ပြီး
စစ်အုပ်ချူပ်ရေးကို အခြေခံတော့ ဘယ်တော့မှ အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ပါ )
လုပ်ရင်းကိုင်ရင်းနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ဘန်ဟာ တက်လာပါတယ် ။
ပြည်ပက ထိုင်းလူမျိုးပညာတတ်တွေ အားလုံးထိုင်ကိုပြန်လာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ် ။
ထိုင်းနိူင်ငံကို တိုးတက်ဖို့ ကြိုးစားကြရင်း
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဘန်ဟာပါဝင်တဲ့ ပါတီက ကိုယ်ကျိုးရှာ ဥပဒေတွေ လုပ်လို့ 
သမိုင်းကြောင်းလိုက်စစ်တော့ ဝန်ကြီးချုပ် ဘန်ဟာ တရုပ်ပြည်ဖွားဖြစ်နေပါတယ် ။
ဒီမိုကရေစီ အခြေမခိုင်သေးတဲ့ ထိုင်းနိူင်ငံမှာ တရုပ်တွေနေရာယူကြတာ
မြေပိုင်ရှင်ထိုင်းတွေ အဖို့ မချိမဆန့် ခံလိုက်ရပါတယ် ။
ထိုင်းနိုင်ငံသား စစ်စစ်တွေ လွတ်တော်မှာ နေရာယူဖို့ တော်လှန်ကြရပါတယ် ။
နောက်တကြိမ်ကတော့ ထိုင်းဘတ်ငွေတွေ လေထဲမှာ မျောပြီး တန်ဖိုးကျသွားပါတယ် ။
တရုပ်သွေးအပြည့်ပါတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တက်ဆင်တက်လာပြန်ပါတယ် ။
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တက်ဆင်ကို ထိုင်းတွေက ပြောကြပါတယ် ။
လူထုထဲဝင်တာ အပြောကောင်းတယ်တဲ့ လူထုကောင်းစားရေးအော်ပြီးလုပ်ပေမဲ့
အမြတ်တော်ခွန်ဥပဒေ ။ မြေယာပိုင်ဆိုင်ရေးဥပဒေ တွေမဲ့ ကိုယ်ကျိုးရှာပြီး စေတနာမှားခဲ့တယ် ။
မူးယစ်ဆေးဝါး နိူမ်နင်းရေးဥပဒေနဲ့ထိုင်းနိူင်ငံထဲမှာ တရားဝင် လူသတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
တရုပ်နွယ်ဖွား တက်ဆင်အဖို့လက်နက်ကိုင်သူ ထိုင်းတွေဟာ သူ့ ရဲ့ရန်သူတွေပါ ။
ဆွေမျိုးအုပ်စုမရှိတဲ့ သူကတော့ အေးအေးဆိုပေမဲ့
ထိုင်းတွေ အသဲကို ကျွဲခပ်လိုက်ပါတယ် ။
နိုင်ငံတကာက သေသေချာချာ စစ်ဆေးပြီးမှ
သွေးထွက်သံယို အနည်းဆုံး နဲ့ စီမံရန်အကြံပေးပါတယ် ။
အာဏာ၇ူး တက်ဆင်က ဝန်ကြီးချုပ် နေရာက အကောင်းဆုံး တုံ့ ပြန် အဖြေပေးလိုက်ပါတယ် ။
နိုင်ငံတကာနဲ့ ယူအန် ဟာ သူအဖေနဲ့အမေ မဟုတ်လို့ 
နားထောင်စရာမလ်ိုဘူးဆို ပါတီကို အမိန့် ပေးခဲ့ပါတယ် ။
ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေမှာ ဘယ်တော့မှ ဒုက္ခသည်မရှိဘူး
အချိန်မရွေး ထိုင်းကိုပြန်လို့ ရတယ် ။
အခုတော့ သူ့ အလည့်ကို ဘီးလည်ပါဘီ ။
စက်ာပူ ဘဏ်တွေနဲ့ တွဲပြီး ပြည်ပတရုပ်တွေ ထိုင်းနိူင်ငံမြေယာပိုင်ဆိုင်ရေးမူ ချလိုက်လို့ 
မြေယာပိုင် ထိုင်းတွေနဲ့ ထိုင်းစီးပွားရေးတရုပ်တွေ တိုက်ပွဲ စခဲ့ကြပါတယ် ။
၂၀၁၀ တိုက်ပွဲ မှာ အနာဟောင်းတွေပြန်ပွလာတာပါ ။
မိဘဆွေမျိုးတွေကို သတ်ဖြတ်ပြီး လူတန်းစားကွဲပြားမှုကို ဘန်းပြတဲ့
အာဏာရူး ကွန်မြူနစ်တွေ ခေတ်ထတာလို့ ထိုင်းတွေက ပြောကြပါတယ် ။
ချမ်းသာတဲ့ အာဏာရူး တက်ဆင်ဆီက ငွေတွေကို
ဆင်းရဲသားတွေကို ငွေပေးပြီး တိုက်ပွဲဝင်ကြတာပါ ။
ဒီနေ့အလည်အလတ် ထိုင်းလူတန်းစားတွေနဲ့ 
တောင်ပိုင်း အလယ်ပိုင်း အနောက်ပိုင်းနဲ့တရုပ်နွယ်ဖွားတွေ မရှိတဲ့ ဒေသတွေမှာ
အေးအေးဆေးဆေး ပါဘဲ ။
ထိုင်းက မိဘရိုးရာ မြေပိုင်ရှင်နဲ့တရုပ်နွယ်ဖွားစီးပွားရေး သမား တိုက်ပွဲပါ ။
တရုပ်နွယ်ဖွားစီးပွားရေး သမားတွေက ဆင်းရဲသားလွတ်မြောက်ရေး အမည်တတ်ပြီး
အာဏာလုပြီး ဘုရင်စနစ် အမြစ်ပြုတ် တိုက်ပွဲမှာ
မြေပိုင်ရှင် ထိုင်းတွေက ဘူမိဘော ဘုရင်ကြီးရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ
စီးပွားရေးကို မပျက်စီးအောင် လျှော့ပေးနေသော်လည်း
နိူင်ငံတကာက လက်ခံအောင် ဒီမိုကရေဒီ နည်းနဲ့ 
အဆင့်ဆင့် ရှင်းနေကြတာပါလို့တင်ပြပေးပါတယ် ။
ထိုင်းမှာ နေခဲ့စဉ်က သိခဲ့ရသည်များနဲ့ 
နယ်သာလန်ရှိ ပညာတတ်ထိုင်းများနဲ့ပညာသင်နေသော
ထိုင်းလူမျိုးတွေက တချိန်က ဆွေမျိုးမောင်နှမတွေ အချင်းချင်း သတ်အောင်
မြောက်ပေးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနစ်အတွေး အခေါ် ရှိနေသူ တွေကို အသွေးထဲ အသားထဲက
ကျွန်တော်တို့ က အာဏာရှင် ပြုတ်ကျရေးအတွက် မည်သည့်စနဏ်ကို မဆို လက်တွဲပေမဲ့
ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေက အစကို စစ်ဆေးပြီး အဆုံးကိုထည့် တွေးတတ်ကြပါတယ် ။
ထိုင်းနိူင်ငံမှာ မြန်မာပြည်က လူတွေ ၃ သန်း ပတ်ဝန်းကျင်နေထိုင်ကြပါတယ် ။
နယ်စပ်တလျှောက် ဒုက္ခသည် စခန်းတွေကလည်း အစီအရီပါဘဲ ။
ထိုင်းနိူင်ငံက စီးပွားရေး သမားတချို့ နဲ့နိုင်ငံရေးသမား အချို့ က မြန်မာပြည်သားများကို
သူတို့ စီးပွားရေးကို အခြေခံတဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ မြန်မာပြည်သားတွေကို အရင်းအနှီးလုပ်တတ်ကြပါတယ် ။
လူမသိ သူမသိ အသက်ပေးခဲ့ရသူတွေ အလောင်းထပ်နေပါပြီ ။
မပြီးသေးတဲ့ မြန်မာပြည်က စစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ကြရေးတိုက်ပွဲကာလတလျှောက်လုံး
မြန်မာပြည်က ထွက်ပြေးနေရသူတွေ ထိုင်းနိူင်ငံမှာ မှီခို လုပ်ကိုင် စားသောက်နေကြရအုံးမှာပါ ။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နေတတ်ဖို့ပြောတတ်ဖို့ လိုပါတယ် ။
တည်ငြိမ်ပြီး တိုးတက်စပြုတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ သားတွေရဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့ 
အာဏာရှင်စနစ်ဆိုး လက်အောက်က မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့ စဉ်းစားမှုဟာ
တော်တော်လည်း ကွဲပြားပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့ မဟာချိုင်းဒေသမှာ
မြန်မာ အမျိုးသမီးငယ်တွေရဲ့ သတင်းကို
ရင်နင့်ဖွယ်ရာ ကြားနေရတာပါ ။
ငွေရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေ လက်ထောက်ချလို့ 
ထိုင်းအောက်ခြေက လူတန်းစားတွေက နည်းမျိုးစုံနဲ့ စော်ကားခံရတာ ၁၉၉၄ လောက်ကထဲကပါ ။
သေမှာမကြောက်တဲ့ ၁၉၈၈က ကျောင်းသားအုပ်စအချိုက ဦးဆောင်စုစည်းပြီး ကာပေးခဲ့တာပါ ။
၁၉၉၉ ၂၀၀၀ နောက်ကစပြီး မြန်မာကျောင်းသားတွေ ထိုင်းက မဖြစ်မနေထွက်ခွာလာတော့
မြန်မာပြည်အာဏာရှင် ဖိနှပ်မှုကနေ ထိုင်းအောက်ခြေလူတန်းစားရဲ့ နင်းပြား ဘဝကို ရောက်ခဲ့ပါပြီ။
အာဏာရှင် စစ်အစိုးရကို မဆိုပါနဲ့ 
ထိုင်းမှာ တရားဝင်ရပ်တည်ပြီး အလုပ်လုပ်နေတာ မိမိအခွင့်အရေး အတွက်
တိုက်ပွဲ မဝင်ရဲကြသေးပါဘူး ။ လျှို့ ဝှက် စုစည်းမှု မလုပ်နိုင်ကြသေးဘူး ဆိုရင်
နတ်ကလိမ်လို့ ခေါ်တဲ့ လူရမ်းကားတွေရဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုကို ယုံကြည်ရင်တော့
မဖြစ်သင့်တဲ့ အခြေအနေတွေကို မြန်မာပြည်သားတွေ ရင်ဆိုင်ကြရမှာပါ ။
မြန်မာပြည်က စစ်အာဏာရှင်ကလဲ သက်ဆိုးရှည်နေမှာပါ ။
သိစေချင်လို့ တင်ပြတာကို ထပ်မံ ပံ့ပိုးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။dollayach
မြန်မာပြည်သားတွေ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဘေးဘရာ ဝေးကင်းစွာ ရပ်တည်နိုင်ကြပါစေ ။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က ထိုင်းအမျိုးသမီးနဲ့ အိမ်ထောင်ကြပြီး
မိန်းမဖက်က အမျိုးတွေက တောင်ပိုင်းနဲ့စစ်တပ်ထဲကမှာ အများကြီး ရှိပါတယ် ။
အစိုးရအနေဖြင့်ရော ထိုင်းလူထု အနေရဲ့ ရော ဧည့်အလုပ်သမားများကို မပါဝင်စေချင်ပါဘူး ။
ကျွန်တော်ရေးလိုက်ရတာက ဦးညိုအုန်းမြင့် အပါအဝင် မြန်မာမီဒီယာတွေ ရေးတာလိုနေလို့ ပါ ။
ပြဿနာတခုကို ခြေခြေမြစ်မြစ် လေ့လာပြီး သုံးသပ်သင့်တာပါ ။
လက်ရှိအစိုးရဟာ အနီ နဲ့ အဝါကြားမှာ ညပ်နေတာပါ ။
မနေ့ ကအထိ အမေရိကန်နဲ့ဥရောပက လက်ရှိ ထိုင်းအစိုးရကို ကူညီဖို့ သဘောတူလိုက်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်နားလည်တာက ဆန္ဒပြရာမှာ ပစ်ခတ်မှုတွေဟာ အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှု သက်ေတပါ ။
ကျွန်တော်ဒီမှာ ထိုင်းသံရုံးက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ပျော်ပွဲ ရွင်ပွဲတွေမှာ ဆွေးနွေးဖူးပါတယ် ။
ကျွန်တော် အတတ်နိုင်ဆုံး သဘောထားတီးခေါက်ပြီး
နေ့ တိုင်း nationa radio ကို နားထောင်နေပါတယ် ။
ရွေးကောက်ပွဲ ကို စောစောလုပ်ဖို့ တောင်းတဲ့ကြားက ပစ်ခတ်မှုတွေ မမျှော်လင့်ဘဲပေါ်လာတာပါ ။
ဆန္ဒပြသူတွေ ကြားမှာ ပိုက်ဆံရလို့အဘီဆစ်နယ်မြေ တောင်ပိုင်းကရော
ဖတ်အိစန် အရှေ့ ပိုင်းကရော ဝင်ကြတာပါ ။
ထိုင်း ကွန်မြူနစ်လို့ ယူဆရတဲ့သူတွေက လက်နက်ကိုင်လိုက်တယ်လို့ ယူဆချက်တွေ radio ကနေ့ တိုင်းကြားရပါပြီ ။
မြန်မာပြည်သားတွေကို ဆင်းရဲသားတိုက်ပွဲ ဆို မြန်မာမီဒီယာတွေ ရေးလာလို
သမိုင်းမှန်ပြောပြပြီး နေတတ်ဖို့ သတိပေးနေတာပါ ။
မြန်မာပြည်မှာ လူမျိုးစုပြဿနာက ကြီးနေပြီး ထိုင်းမှာမရှိတော့ပဲ နယ်မြေကာကွယ်ရေးကို ဘုံတူညီချက်
သဘောထားဟာ လေးစားစရာပါ ။
ထိုင်းစစ်တပ်ဟာ ဘုရင့်အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ အတူ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ပရင်လက်ထက်ကစပြီး
အာဏာခွဲဝေရေး ပါလီမာန်စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့တာပါ ။
ထိုင်းစစ်တပ် အာဏာသိမ်းတာဟာ စစ်တပ်ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် မဟုတ်လို ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးရင်
လွတ်တော်ကို ပြန်ပေးနေကြပါ ။
ထိုင်းမှာ စစ်တပ် ။ ပုလိပ် ။ တရားရေးအုပ်စု ။ လက်နက်ကိုင် ရပ်ရွာ ကာကွယ်ရေးတွေက သီးခြားရပ်တည်တာပါ ။
ထိုင်းပြည်သူတွေက လူတန်းစားပြဿနာလို့ မသတ်မှတ်ပါဘူး ။
နယ်မြေကာကွယ်ရေးခုခံစစ်နဲ့ကွန်မြူနစ်တိုက်ဖျက်ရေးလို့ ခံယူကြပါတယ် ။
Posted by Mr Htay Tint at 12:45 AM0comments
Dhr Htay Tint ကိုဌေးတင့်
( ဒတ်ခ်ျလို Dhr ဆိုတာ Mr ပါဘဲ။ အထင်မကြီးပါနဲ
နယ်သာလန်မြန်မာတချို့ ချော်လဲ ရောထိုင်ငြိမ်နေကြလို့ )
၁၉၆၀ တန်ခူးလ သက်ြန်တွင်းမှာ တောင်ကြီး စပ်စံထွန်းဆေးရုံမှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ် ။
မွေးချင်း အားလုံး ၈ ယောက်ရှိပါတယ် ။
ကျွန်တော်က ဒုတိယဖြစ်သော်လည်း အကြီးဆုံးက ငယ်ငယ်က ဆုံးခဲ့လို့ 
အကြီးင်္ဆုးလို့ ပြောရင် ရပါတယ် ။
၁၉၈၀ မှာ တောင်ကြီးကောလိပ်ကို သချာ် အဓိကနဲ့ စတက်ခဲ့ပါတယ် ။
၆ လ အကြာမှာ စရိပ်မရှိတော့လို့မန္တလေး ဒေသကောလိပ်ကို ပြောင်းရွေ့ ခဲ့ပါတယ် ။
၁၉၈၂ မှာ မန္တလေး ဒေသကောလိပ်ပြီးလို့ 
တတိယနှစ်ကို ၇န်ကုန်မှာဓါတုဗေဒ အဓိက ဘာသာနဲ့ ဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။
ရန်ကုန်ကို ၁၉၈၂ နှစ်လည်ပိုင်းမှာ မအူမလည်နဲ့ တောသားရန်ကုန် မြို့ တက်ပါတယ် ။
အူကြောင်ကြောင် အတွေ့ အကြုံတွေနဲ့အတတ အတွေးအခေါ်တွေကြောင့် အသဲကွဲ အရှက်ရဖူးပါတယ် ။
၁၉၈၄ မှာ ဓါတုဗေဒနဲ့ ဘွဲ့ ရပြီး အဓိပတိလမ်း သမိုင်းကဗျာရေးမှုနဲ့ ရေကြည်အိုင်ကို အလည်သွားဖူးပါတယ် ။
နဖုံခါပေးလိုက်လို့အချောင်စား ဝန်ထမ်း ဘဝကို လုပ်ခွင့်မရှိပါဘူး ။
အထက်တန်းရှေ့ နေသင်တန်း တက်ခဲ့ပါတယ် ။
ပလပ်စတစ် တင်ဒါရပြီး ဘဝကိုအခြေချမလို့ ပြင်နေဆဲ
စက်မှုတက္ကသိုလ်က မန္တလေး သူငယ်ချင်းအုပ်စုနဲ့ 
မတ်လပြဿနာ အစထဲက လက်သီးဆုတ် အံကြိတ်ပြီး
မြို့ ပြ နောက်ဆုံးနှစ် (၁၉၈၈ စောစောပိုင်း ကာလ)
ကို ဌေးဝင်း (ကျောက်မဲ လက္ဘက်ခြောက်လုပ်ငန်း အုပ်စု)
ကို ညွန့် ဝေ (မန္တလေး သားရေ ဆင်ဖိနပ်လုပ်ငန်း )
ကို အောင်သူကြွယ် (မန္တလေး တက္ကသိုလ် ပညာရေးဝန်ထမ်း အုပ်စု)
ကို ညီညီ ပင်းတယ ( လူမျိုးစု အုပ်စု )
စတဲ့ အထက်မြန်မာပြည်က အုပ်စုနဲ့ တွဲလုပ်ခဲ့တယ် ။
လျို့ ဝှက်စွာ ညီညွတ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်သူမှ စာရေးပေးမည့် သူတွေလည်းမရှိသေးပါ ။
မင်းနေရာက အထိရောက်ဆုံး ဘာလုပ်နိုင်လဲ ။
ငါတို့ ဘာလုပ်ပေးရင် ရနိုင်လဲ ဆိုတဲ့ 
အလုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးမူ တခုထဲ ယခုထိကိုင်ထားပါတယ် ။
တံတားနီလို့ ခေါ်တဲ့ ဂုဏ်ပြုနေတဲ့ ၈၈ ဂျွန်အရေးအခင်းမှာ
ဝမ်းပိုက်ကို နံပါတ်ဒုတ်နဲ့အရိုက်ခံရတဲ့ ဝေဒနာနဲ့ 
အတွင်းကြေပြီး ၂လကျော်မှာ ဆုံးပါးခဲ့ပါတယ် ။
၂၀၁၀မှာ တော့ ညီအရင်းတယောက် ခုခံစစ်နွဲရင်း
ဒေါင်းယောင်ဆောင်သော အာဏာနီ အရူးအမိန့် နဲ့ 
တောထဲမှာ အသတ်ခံရတာ ထပ်ကြားရပါတယ်
လှိုင်မြို့ နယ်က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစုကို ဦးဆောင်ပြီး
၁၉၈၈ ဇူလိုင်လ မှာ ဆေးခန်းတခု လူနာစောင့်တဲ့ အခန်းမှာ
လှိုင်မြို့ နယ် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ် ။
ရှစ်လေးလုံး လူထုလမ်းမပေါ်ထွက်ခင်မတိုင်က ဖွဲ့ စည်းခဲ့တာပါ ။
မြို့ နယ်က ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခဲ့ရာမှာ
ကိုငြိမ်းချမ်းက အတွင်းရေးမှုး တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။
၈ သြဂုတ်လ ၁၉၈၈ မှာ အထွေထွေ သပိတ်ကြီးကို စတင်ခဲ့ပါတယ် ။
၂၀ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၈ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်မှာ နောက်ဆုံးဆွေးနွေးပြီး
လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင် နယ်မြေကို ပြောင်းရွေ့ တိုက်ပွဲဝင် ခဲ့ပါတယ် ။
အတွင်းရေးမှုး လုပ်ငန်းစစ် စခန်းကော်မီတီ ဟွေစေတီ ကရင်နီမှာ တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ် ။
ပို့ ချပေးပြီး ၃၀၃ ကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ကူညီတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ် ။
နိူဝင်ဘာ ၁၉၈၈ မှာ စခန်းကတာဝန်ပေးချက်အရ
ကေအန်ယူနယ်မြေက ရေကျော်စခန်း ကျောင်းသားဗဟို အစည်းအဝေးကို ရောက်ခဲ့ပါတယ် ။
ကိုထွန်းအောင်ကျော် ၊ ကိုသန်းဝင်း ၊ ကိုကိုဦး တို့ အဖွဲ့ က နိုင်ငံရေးကို ဦးတည်ကြပြီး
ကျွန်တော်နဲ့ကိုထွန်းဦး(စက်မှုတက္ကသိုလ်) က စစ်ရေးဆွေးနွေးကာ ကျောင်းသားတပ်မတော်
တပ်ရင်းအလိုက် ဖွဲ့ စည်းပုံရေး စစ်သင်ခန်းစာတွေရေးပြီး ကရင်နီမူလဒေသကို ပြန်ခဲ့ပါတယ်
၁၉၈၈ ဒီဇင်ဘာလမှာမယ်နပလောကို အထူးသင်တန်းတက်ရန် အရွေးခံရပြီး
ပြည်တွင်းက မြို့ နယ်အလိုက် ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပြည်တွင်းလူထုလှုပ်ရှားမှုထပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်
စစ်ရေးအရ ဦးဆောင်နိူင်ရေး ခြသေ့စီမံချက် သင်တန်းတက်ခဲ့ပါတယ် ။
(၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အန်အယ်ဒီ နိုင်လို့ စီမံချက်ကြီး ရပ်ခဲ့ပါတယ် )
သင်တန်းပြီးတော့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ဗဟိုမှာ ရုံးထိုင်ပြီး
စစ်ရေးကော်မီတီမှာ ကိုဆန်နီနှင့် အတူတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ် ။
မင်းသမီးမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်
ဒုတိယအကြိမ် ညီလာခံကို မိုးကဲစခန်း တပ်ရင်း ၂၀၆ တပ်ခွဲ ၄ က ကိုယ်စားအဖြစ် ရွေးတင်ပေးပါတယ် ။
ပြည်တွင်းနိူင်ငံရေးလိုအပ်ချက်ယူဆပြီး လူသိများတဲ့ ကိုမိုးသီးဇွန်ကို အတိုက်အခိုက်ကြားက ဝိုင်းတင်ခဲ့ပါတယ် ။
ညီလာခံကာလမှာ မိုးကဲစခန်းက ကိုစီုးလေး လိုက်လာပြီး ဗဟိုမှာ တာဝန်ယူချင်လို့လွဲပေးခဲ့ပါတယ် ။
ရာထူးထက် အလုပ်က ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ယခုအထိ ခံယူထားဆဲပါ ။
သန်းကျော်ဌေး(၆၀၆) နဲ့ မြင့်လှိုင်(၂၀၆) ပြန်ခေါ်လို
့ကျောင်းသားနိူင်ငံရေးလောကကို ပြန်ဝင်ခဲ့တယ် ။
ထိုင်းထောက်လှမ်းရေးက မနီလွိုင်ကို ၁၉၉၉ ဒီဇင်ဘာလမှာ ပို့ လိုက်ပါတယ် ။
အတွင်းရေးမှုးတာဝန်ကို လူမှုရေးဌါန မြန်မာကျောင်းသားများအစည်းအရုံး
မနီလွိုင်ကျောင်းသားများစခန်းမှာ ၂၀၀၀ က တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ် ။
၁၇ မေ ၂၀၀၁ မှာ နယ်သာလန်ကို စပြီးအခြေချပါတယ် ။
၂၀၀၃ ဒီပဲရင်းမတိုင်ခင် အထိ
နယ်သာလန်စကား စာပေနဲ့ ဥရောပယဉ်ကျေးမှုတွေသင်နေပါတယ် ။
ဒီပဲရင်း အဖြစ်မှန်ကို စာသင်ခန်းထဲမှာ အင်တာနက် မက်ဆင်ဂျာက
သိရပြီး စာသင်ခန်းကို ကျောခိုင်းကာ ကျောင်းပြစ် မိသားစုပြစ်ပြီး
မြန်မာ့အရေးဟာ ဥရောပ အရေးနဲ့ တရားသားတည်း ဖြစ်ရမယ်မူ ကို
ချပြီး လုပ်ခဲ့ပါတယ် ။
၂၀၀၄ မှာ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးအဖြစ်
မြန်မာဒီမိုကရေစီအင်အားစု(နယ်သာလန်) မှာ တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ် ။
၂၀၀၅ မှာ ကျန်းမာရေးအရ အနားယူလိုသော်လည်း
နောက်တက်လာသည့် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးကို လုပ်ငန်းများ ဆက်လုပ်နိုင်ရန်
အတွင်းရေးမှုး နိုင်ငံရေးဌါနကို ၆ လလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဖွဲ့ စည်းပုံဆွဲရင် အနားယူသွားသူတွေ အတွက်
ဘယ်တော့မှ မဆွေးနွေးကြပါဘူး ။
ဒါကြောင့် တသက်လုံး အာဏာကိုင်ရေးလမ်းစဉ်ကို ဦးစားပေးတာ မဆန်းပါဘူး ။
(အနှစ် ၂၀ လောက် အရက်သောက်တဲ့ အကျိုးက မှတ်ဥာဏ်တွေတုံးစေကာ
စဉ်းစားရင် လှေနံ ဓါးထစ် ဖြစ်ပြီး တုံ့ ပြန်တာနှေးပါတယ် )
ပြည်တွင်း ထောက်ပံ့ရေးတခုတည်းကို သာဇောင်းပေးခဲ့ပါတယ် ။
၂၀၁၀မှာ တော့ မြန်မာပြည်အတွက်
အုပ်တချပ် သဲတပွင့် တော့ တနေရာရာက တခုခုတော့
တရားဝင် နာမည်ထုတ်ပြီး လုပ်ခွင့်မရှိတာကို နားလည်ပေးပါ ။
အနည်းဆုံး - + x ပေါ့
တဟေးဟေးနဲ့တေးတွေ ငြီးညူ နေသံ ။
အရိုးတွေ လေချွန်တာ အမှန်
ဆက်ကာ ဆင့်ကာတွေးလိုက်မိတော့ ။
မနားတမ်း ပြေးထွက်လာတယ် ။
တချိန်က အဂ်လိပ် လက်အောက်
မလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ ဘဝတွေမို့ 
ဒီသဘောက်သားကို နှင်ပစ်ခဲ့ကြ ။
်ရာဇဝင်ကို အသစ်ဖြစ်စေဖို့ 
ကျောင်းတော်က ပြည်ချစ်တွေ စုစည်း
အနှစ်တွေဘဲ စုပြီး မငြီးးးကြဘူး
ဒို့ အရေးတွေ နောက်မဆုပ်ခဲ့ဖူးလူး။
လက်သံပြင်းတဲ့ ဂျီသရီးရဲ့ ကျည်ဆံ ။
ဗုံးဆံတွေ အဆစ်ထဲ့နဲ့ 
ဘဝက်ညံခဲ့တာ အကြိမ်ကြိမ် ။
မိဘတွေ စည်တီး ပြည်ပြီးအက်ခဲ့တာ အကြိမ်ကြိမ်
ကျန်ခဲ့တဲ့အရိုးတွေနဲ့အလောင်း
ကတ္တရာတွေနဲ့ အခါခါလောင်း ။
(၁၉၈၃ မြင်းခြံ ကိုတင်လှိုင်(ဓါတု)
မထုတ်လိုက်ရတဲ့ ကဗျာစာအုပ်ထဲမှာ ရေးခဲ့ဘူးပါတယ် )
လွန်ခဲ့သူ နှစ်ပေါင်း ၂၀ က သုံးသပ်ချက်ဟာ
အခုလဲ အဲဒီလို လူတွေရှိနေဆဲနော် ။
တချို့လည်း ကြိုးစားနေဆဲ ။ တချို့ လဲ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လွတ်လပ်ရေးအတွက်အသက်ပေးခဲ့ကြပြီ ။ ကောင်းတဲ့ဘုံတွေက ဆက်ကူညီကြပါ ။
အပျော်ရှာ နိုင်ငံတကာက လူတသိုက်သို့ 
လူရမ်းကားတွေကခြံပြင် ခြံတွင်းခွေး မဟောင်ရန် ရိုက်သတ်
တရုပ် ရုရှား လောက်ကောင် အားတိုးဆေးနဲ့ 
ရာဂဘီလူး အာဏာရူး စစ်ဗိုလ်တွေက
နဝတ နအခ ကြံ့ဖွတ် စွမ်းအားရှင် တွေလေ
အနှစ် ၂၀ ကျော် ကြာသွားခဲ့ပါပြီကော
စားလို့ ဝတော့မှ တော့မှ တရားဝင် လက်ထပ်ဖို့ 
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ကျင်းပမယ်တဲ့
ပြည်တွင်းက အမေနဲ့ အဘတို့ ကတော့ မတရားရုံးမှာ
ကြိုးစားတာ မရတော့လို့ ဖျာလိပ်ပြီး
လူထုကို ဦးတည်မဲ့ ရပ်ကွက်ထဲဆင်းတော့မယ်
ဘာသာမတူ လူမျိုးကွဲ မောင်နှမတွေကကော
ဘယ်လိုလဲ ဆီပုလင်းလား သေနပ်လား
ဘာကို ရွေးပြီး ဘာကို ပြေးရှာပြီး ပို့ ပေးမှာလား
(နယ်သာလန် ၇ ဧပြီလ ၂၀၁၀)
( Nederland7April 2010)
Posted by Mr Htay Tint at 12:18 AM2comments
Labels: ၁၀ မေ ၂၀၁၀